အကောင်းဆုံး ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသူများ နှင့်ရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များမှနိုင်ငံသားသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှနိုင်ငံသား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း၊ , ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိစီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် i n ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှစ်ခု၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏သံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘူဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 1,024,000
ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ တောင်များကတောက်ပနေပြီးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရှိအခြားနိုင်ငံအချို့ကိုငြူစူရန်ဘာမျှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤနေရာတွင်ထူးခြားသောဝတ်ရည်ထုတ်လုပ်သူတစ်တန်ရှိသည်။ ကွန်တိန်နာများကိုလမ်းဘေးနှစ်ဖက်နှင့်မည်သည့်မြို့များတွင်မဆိုဝယ်ယူနိုင်သည်။ မြေမှကြီးထွားလာသောအစားအစာများကိုနေရာတိုင်းတွင် ၀ ယ်ယူရန်နှင့်အရသာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ နွေရာသီနှင့်အအေးမိသည့်ဆောင်းရာသီ။ ဆောင်းရာသီသည်အောက်တွင်ရှိသည် - ၁၅။ နွေရာသီသည်ပလိုဗစ်ဒ်နှင့်ဘူဂေးရီးယားတောင်ပိုင်းရှိအချို့သောဇုန်များတွင် ၃၅ သို့မဟုတ် ၄၀ အထိဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုမြေပုံတွင်ထည့်သွင်းပေးသည့်နောက်တစ်ခုမှာနွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်သာယာသောသဲသောင်ပြင်များနှင့်ပင်လယ်နက်၏ပူနွေးသောရေအပူချိန်တို့ကြောင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေများသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအားကစားအားပေးသည့်ကမ်းခြေအစင်းများမှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောစခန်းချနေရာများသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်သင်၏မြို့ပြဒေသတစ်ခုသို့မဟုတ် ပို၍ ကျိုးနွံသောမြို့များနှင့်မြို့များတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေပေါ်တွင် မူတည်၍ သင့်အားကွဲပြားခြားနားသောတွေ့ဆုံမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိမြို့များကိုပုံဖော်သည့်အခါ“ မြင်းနှင့်ထရပ်ကား” မြို့များကိုပုံဖော်သည်။ ဤအချက်များအရဘူလ်ဂေးရီးယားရှိကျေးလက်ဒေသတည်ရှိမှုကိုသင်စဉ်းစားမိသည့်အခါမျိုးတွင်ရာသီဥတုမျိုးတွင်နေထိုင်မည်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ အခြားသူများနှင့်မဝေးနိုင်သည့်မည်သည့်နည်းမဆိုထိုဒေသများကို ရွေးချယ်၍ တန်ဖိုးထားတတ်သည့်ဟောင်းနွမ်းသောလူအမြောက်အများရှိကြသည်။ ပိုမိုရိုးရှင်းသောဘဝ၏အကောင်းဘက်ဖြစ်သည့် Veliko Tarnovo, Dobrich နှင့် Elhovo အနီးရှိခရိုင်များသည်စုံတွဲတစ်တွဲကိုသာရည်ညွှန်းရန်သာဖြစ်သည်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားလူ ဦး ရေသည်လျင်မြန်စွာကျဆင်းနေသည်။
ဤအဂတိလိုက်စားမှု၏အခြေခံအကြောင်းအရင်းနှစ်ခုမှာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (ဥရောပသမဂ္ဂသို့တိုးပွားလာချိန်မှစပြီးဘူလ်ဂေးရီးယားမှလူအများအပြားထွက်ခွာသွားခြင်း)၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးချခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်နာရီနှင့်တူသောလူတစ် ဦး ၏အသားတင်ချို့တဲ့မှုရှိသည်။ အမှန်မှာ Eurostat မှစာမေးပွဲများအရ ၂၀၅၀ တွင်ဘူလ်ဂေးရီးယားလူ ဦး ရေသည်နောက်ထပ်လူ ဦး ရေသန်းတစ်သိန်းကိုဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး ၆.၀၀၀၀၀၀ အောက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ဘူဂေးရီးယားပင်လယ်နက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိပင်လယ်ကမ်းခြေများသည်ရာသီဥတု (ဇူလိုင်လ - )ဂုတ်လ) အတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည့်ဟိုတယ်များတွင်တည်ရှိသည်၊ သို့သော်ဆုတ်ခွာနေမှုများအကြား, သင်သည်အံ့အားသင့်စေမည့်အံ့အားသင့်သွားစေသည့်ကမ်းရိုးတန်းရှိပင်လယ်ကမ်းခြေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် အလျင်အမြန်ခရီးထွက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သကဲ့သို့သင်တို့သည်လည်းထိုအရာကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရိုးရှင်းပါသည်။ အရာခပ်သိမ်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနီးသည်။ ဆိုဖီယာ - ဗာနာ (ခရီးသွားရန်ဆွဲထားသောခွဲခြားမှုတစ်ခုမှ ၄၅၀ ကီလိုမီတာသာရှိသည်။ ) နှင့်မြို့ပြtwoရိယာနှစ်ခုကြားတွင်ပျံသန်းသည့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များလည်းရှိသည်။ မိနစ် ၆၀ ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းကိုနှစ်သက်ချင်။ အခွင့်အရေးအလုံအလောက်ရချင်သည့်အချိန်တွင်ရိုးရိုးရထားစီးနင်းခွင့်ကိုသင်ယူနိုင်သည်၊ တောင်များမှပင်လယ်နက်ကမ်းခြေသို့နာရီပေါင်းများစွာနှင့်အလယ်၌ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ ချိုင့်ဝှမ်းချိုင့်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်သာမန်ထက်ထူးကဲသောဖြစ်မှုမဟုတ်ပါကအစားအစာနှင့်သောက်ခြင်းသည်ကျိုးနွံ။ အထောက်အကူပြုသည်။ နံနက် ၁၂ နာရီမှ ၂ နာရီအကြားကော်ဖီဆိုင်အများစုသည်အထူးအစီအစဉ်များကိုစားသုံးလေ့ရှိပြီး ၅-၆ လီဗာဝန်းကျင်သာရှိသည်။ Espressos ဟာဥရောပမှာကျန်ရှိတာထက်အများကြီးစျေးသက်သာတယ်။ သင်တစ် ဦး espresso များအတွက်နေ့၏အစအ ဦး ဆီသို့အဆင့်မြင့်ကော်ဖီဆိုင်သို့သွားနိုင်ပါက 12 leva ကုန်ကျသည်။ ၁ ယူရို။ သငျသညျထိုနည်းတူယူရိုနှင့်ပတ်သက်။2leva များအတွက်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ရနိုင်သည်။
ဘူဂေးရီးယားအလွန်ဝမ်းမြောက်သောတိုင်းပြည်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုလူမျိုးသည်အေဒီ ၆၈၁ တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသင်မမျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအက္ခရာများကိုတီထွင်ဖန်တီးသူများသည်ထိုအချိန်ကဆလာဗစ်နိုင်ငံအများစုသို့ကြီးထွားလာပြီးချီးမွမ်းရန်နေ့တစ်နေ့ပင်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဘူဂေးရီးယားစာလုံးအစဉ်အလာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရမေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်သူတို့၏မော်တော်ယာဉ်တန်းဖြင့်လမ်းများယူဆောင်လာခြင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ငယ်ရွယ်သောဘူဂေးရီးယားလူမျိုးအများစုသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလေ့ရှိပြီးအလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးအနီးအနား၌ရှိနေခြင်းသည် ၀ မ်းသာစရာဖြစ်သည်။ သင်ကြားပေးသောဘူဂေးရီးယားလူမျိုးအများစုသည်အိုင်တီနှင့်ဒီနေရာတွင်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေသည့်နေရာများတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဘူဂေးရီးယားလူမျိုးများသည်လည်းသူတို့၏အိုင်တီစွမ်းရည်များကြောင့်လူသိများကြသည်။
အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရပ်ခြားမှအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့သူတို့ဝေးကွာသွားသောအခါ၌သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဤနေရာတွင်နေထိုင်နိုင်သည့်အလွန်ကောင်းသောလျော်ကြေးကိုရယူကြသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးဝက်ဘ်အမြန်နှုန်းရှိသည်။ သင်သည်ငွေသားအတွက်ထူးခြားသောမက်လုံးတစ်ခုရရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကျိုးနွံ။ အားကိုးရလွယ်ကူပြီးအလွန်ကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်သည်။ ပြန်လည်ခွဲဝေမှုအောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှအစိတ်အပိုင်းများတစ်ခု။ ဆဲလ်ဖုန်းအစုအဝေးများသည် ၂၅ ခုအတွက်ကျိုးနွံပြီးသင် GB ကိုအင်တာနက်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသို့အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဘူဂေးရီးယားသည်သင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သူမဟုတ်ပါကဘူလ်ဂေးရီးယား၏ပြင်ပမှငွေပေးချေမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူလျှင်အထူးသဖြင့်ကြီးမြတ်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးတစ်ခု၊ သို့မဟုတ်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်နေထိုင်ရန်အလွန်ထူးခြားသောနေရာဖြစ်သည်။ မိသားစုတစ်ခုစတင်ရန်နှင့်ကမ္ဘာ၏ ၆၆% ကျော်နေထိုင်ရန်ပိုမိုနှစ်သက်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဘူလ်ဂေးရီးယား
1 နှစ် PR စနစ်ကိုင်ဆောင်ထားပြီးနောက်
ယူရို ၂၅၀,၀၀၀ (စီးပွားရေးယာယီနေထိုင်ခွင့်သာ)
€ 512,000 စီးပွားရေးအရင်းအနှီး / အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ (PR ကိုချက်ချင်းထုတ်ပေးသည်)
ယူရို ၁ သန်းစီးပွားရေးအရင်းအနှီး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ
အိမ်ခြံမြေရှိယူရို ၃၀၀,၀၀၀ (ယာယီနေထိုင်ခွင့်သာ)
ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးမကြာမီကာလတွင် Schengen ဇုန်၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမည်။ ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်သည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဗီဇာအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားသည်သင့်အားဗီဇာမပါဘဲဥရောပတစ်ခွင်သွားလာရန်အခွင့်အရေးပေးနိုင်သည်။ ၂ နှစ်တာကြာပြီးနောက်သင်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတွင်အမြဲနေထိုင်သူဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကျိုးကျေးဇူးများတွင်အခွန်နည်းပါးခြင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အခြားများစွာတို့ပါဝင်သည်။ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားခံယူရန်သင်သည်ဘာသာစကားသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသားခံယူပြီးနောက်သင်အလွယ်တကူခရီးသွားလာနိုင်ပြီးအီးယူ၏မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနေထိုင်နိုင်သည်။
ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ်ယူဆောင်လာခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးများအပါအ ၀ င်သင်၏မိသားစု ၀ င်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။
သငျသညျပထမ ဦး ဆုံးကိုးလအထိအမြဲတမ်းနေထိုင်ရာဖြစ်လာသည်။ ထိုကာလအတောအတွင်းသင်သည်သင်၏ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသို့ ၂ ကြိမ်နှင့်ဘူဂေးရီးယားကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့လာရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ဖိုင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပမာဏ BGN ၁ သန်း (ယူရို ၅၁၂,၀၀၀) ကိုပေးပို့ရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးသောအခါ D အမျိုးအစားဗီဇာကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ဗီဇာရသောအခါ, သင်ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့သွားရောက်နှင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းပါ။ နောက်တစ်ခါသင်၏အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိရန်သင်သွားလည်သည်။
အမြဲတမ်းနေထိုင်သူတစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးနောက်သင်သည်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်နောက်ထပ်ယူရို ၁ သန်း (ယူရို ၅၁၂၀၀၀) ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များတွင်ငွေသွင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်အစိုးရအတည်ပြုထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရရှိနိုင်သည်။
သင်သည် BGN ၁ သန်း (ယူရို ၅၁၂၀၀၀ ခန့်) ကိုအစိုးရငွေချေးစာချုပ်တစ်ခုတွင် ၅ နှစ်အတွင်းအပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ ၅ နှစ်အကြာတွင်အကျိုးစီးပွားမရှိဘဲပြန်အမ်းမည်။ လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုဥရောပဘဏ်တစ်ခုအနေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည်။
မြန်ဆန်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် BGN ၁ သန်း (ယူရို ၅၁၂၀၀၀) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို (၂) နှစ်ထားသင့်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် Bond Bond Portfolio ၌ဖြစ်စေ၊ ဘူဂေးရီးယားအစိုးရမှအတည်ပြုသင့်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေအပ်ငွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
နိုင်ငံသားလျှောက်လွှာတွင်ယူရို ၇,၅၀၀ ပေးဆောင်ရမည်။ မိသားစု ၀ င်များသည်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။ နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားအစီအစဉ်အတွက်အပြောင်းအလဲအတွက်အခကြေးငွေမှာယူရို ၂၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးအတွက်အပိုဆောင်းယူရို ၂၅၀၀ ကိုပေးသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှ Golden Visa သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကန့်သတ်ထားရုံသာမကဘဲဘူလ်ဂေးရီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ဘူလ်ဂေးရီးယားမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီပေးပါသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာတို့ပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား၊
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့ဘူလ်ဂေးရီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားပြုမှု။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဘူဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဘူလ်ဂေးရီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသား
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအတွက်ဘူဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖောက်သည်များအားဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စေ့လေ့လာခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဘူလ်ဂေးရီးယားမှလက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘူဂေးရီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဘူဂေးရီးယားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ကိုင်နေသောဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဘူလ်ဂေးရီးယား ဘူဂေးရီးယားရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရှေ့ရပျ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးကိုမထောက်ပံ့ပါ
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ဘူလ်ဂေးရီးယားအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဘူလ်ဂေးရီးယားမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဘူဂေးရီးယားအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအပါအ ၀ င်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူများအားကူညီပေးနေသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ဘူလ်ဂေးရီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တွက်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များအရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်လည်းပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အခြားအကြံပေးများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာ။ မရပါ၊
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဘူဂေးရီးယား၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့် 106 နိုင်ငံများ (ဘူဂေးရီးယား၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဘူလ်ဂေးရီးယားမှရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် သင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ဘူလ်ဂေးရီးယား ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ဘူဂေးရီးယားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဘူဂေးရီးယားရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် Setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဘူလ်ဂေးရီးယား.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံမှပေးသည်
ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် Web Design
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက် App Development
ဘူဂေးရီးယားတွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များထားရှိခြင်း၊ ဘူဂေးရီးယားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးသည့်အဖြေများပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက်ဘူလ်ဂေးရီးယား၌နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကဘူလ်ဂေးရီးယား၏ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်စတေးလ်သို့မဟုတ်တရား ၀ င်ဘူဂေးရီးယားကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏နေထိုင်မှုကိုဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘူဂေးရီးယား၌တည်၏။
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် | ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဘူဂေးရီးယားရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ အကောင်းဆုံးမှာဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | ဘူဂေးရီးယားရှိတတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး | ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဘူလ်ဂေးရီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဘူဂေးရီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘူဂေးရီးယားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဘူဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဘူဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၁,၀၂၄,၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တိုင်ပင်ကြေးကိုသာပေးရပါမည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာရှမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသား၊ အာဖရိကမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း။ မလေးရှားမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နီပေါမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိန္ဒိယမှဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသား ယူအေအီးမှဘူလ်ဂေးရီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
စီးပွားရေး၊ စွမ်းအင်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြည်သူ့လုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာန
အလုပ်သမားနှင့်လူမှုရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ပညာရေး၊ လူငယ်နှင့်သိပ္ပံ ၀ န်ကြီးဌာန
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ပို့ဆောင်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
link ကိုမှ ဘူဂေးရီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဘူဂေးရီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်